ဖင်ပြတာ နာမည်ကြီးချင်လို့လား ဆိုတဲ့ သန္တာဗို
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ကိတ်ကြောင်းပြတဲ့ ကောင်မလေးတွေအရမ်းကိုများနေပြီး တင်အသားပေးပုံလေးတွေ ၊ ဗွီိဒီယိုအတိုလေးတွေ ခေတ်စားနေပြီး ပုရိသတွေကလဲ အရမ်းကို ကြွေနေကြပါတယ်။ အဲ့ဒိခေတ်စားနေတဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သန္တာဗို က သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာမှာ စာတချို့ရေးသားဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီစာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သူမရဲ့ အနုပညာလောကထဲက လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တွေရော၊ ပရိတ်သတ်တွေကပါ ဝေဖန်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။
သူမက " ဖင်ပြပြီး နာမည်ကြီးချင်တာလား ? Like များချင်တာလား ? " ဆိုပြီး ရေးသားထားပါတယ်။ သူမ အနေနဲ့အနုပညာပေုံစံလာကထဲကိုရောက်ရှိလာကတည်းက သွယ်လှတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ နိုင်ငံတကာမော်ဒယ် တွေရဲ့ ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ လူသိများလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူမ ရဲ့ လက်ရှိအချစ်ရေးမှာ တည်ငြိမ်အေးဆေးတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြီး လက်ထပ်ဖို့ကတော့လိုပါသေးတယ် တဲ့။ သူမရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အမူအရာလေးတွေနဲ့ စွဲမက်စရာ ပုံလေးတွေကို ဖေါ်ပြပေးထားပါတယ်နော်။
သူမကိုချစ်တဲ့ပရိတ်သတ်ကြီး Like & Share လေးလုပ်ပေးကြပါဦးနော်။ ဖတ်ရှု့ပေးတဲ့ မိုမိုလေးချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
Jul22020 (8137 views)
Jul22020 (5430 views)
Jul32020 (2785 views)
Jul32020 (2672 views)
Jul32020 (1545 views)
Jul32020 (2849 views)
Jul22020 (2547 views)
Jul22020 (1885 views)